China Cement dumbbell vagadziri uye vanotengesa | Meiao
Kambani yedu haingogadziri epamusoro-magumo emidziyo yemitambo, asiwo yemusika wepasi-wekupedzisira, isu tine zvigadzirwa zvakavakodzera. Iyi simende dumbbell ndicho chigadzirwa chedu chitsva, chinova chinogarisana nharaunda uye chinogara kwenguva refu. Iko kusimbisa ndekwekuti mutengo zvakare wakachipa kwazvo, saka unozivikanwa kwazvo nevatengi
Zvinyorwa nezvazvo, Iri dumbbell ndiro rinodikanwa kutanga kugadzira ganda repurasitiki. Yese dumbbell ndiro ichave nekahomwe kadiki pazasi iyo inogona kuvhurwa. Kana ganda repurasitiki rapera, tinodurura samende yacho mupurasitiki kuburikidza nemakomba. Kana tapedza kuzadza, isa chivharo kumashure uye dumbbell ndiro yagadzirira. Uye dumbbell bar ipurasitiki yakaputirwa nepombi dzematare. Uye nzungu ipurasitiki. Iwe unogona kufunga kuti haina kusimba nekuti yakagadzirwa nemapurasitiki, asi chaizvo usazvidya moyo, isu tese takaedzwa, yakasimba uye yakachengeteka. Uye mapurasitiki ese atinoshandisa ane hushamwari uye haana kukuvadza hutano hwedu.
Nezve izvo zvirevo, isu tine 10-15-20-25-30-40-50KG. Iyo simende dumbbells yatakaburitsa kare ese echinyakare kutenderera dumbbell ndiro. Mushure mekuvandudza uye shanduko, isu takawedzera octagon dumbbells, ayo anotaridzika zvirinani uye akatsiga pasi. Vatengi vazhinji vanovada zvakanyanya. Yedu simende dumbbells inogona zvakare kushandiswa nekupfeka yekubatanidza tsvimbo. Kana tisingashandise tsvimbo yekubatanidza, iwo mabhero. Kana isu tikawedzera yekubatanidza tsvimbo, iyo dumbbells inozove barbells. Zvekureruka kwevatengi kutakura, isu tinogadzirawo zvimisikidzo zvakaiswa, rinova bhokisi repurasitiki rehukuru chaihwo. Iwe unogona kuisa peya yeakakomberedza mubhokisi zvizere, iri nyore kwazvo kutakura.
Nezve kupakata: isu tinoisa iyo dumbbell mumakatoni, uye pakupedzisira ndokuiisa munhovo. Nhovo ndiyo inowanzo shandiswa nzira yekutakura mukutakura, uye zvakare ndiyo yakanyanya kuchengetedzwa kune izvo zvigadzirwa, saka hapana chikonzero chekufunganya nezve izvo zvigadzirwa zvichakuvara. Tichaputirawo akati wandei matete efirimu yekudzivirira pane iri kunze kwepara.
Tikugashirei kutenga yedu simende dumbbells, isu tinokupa iwe yakachipa mutengo, uye kune akawanda matsva mafashoni aunosarudza kubva.
Pashure: Meiao Fitness yakajeka ketera bhero SET
Zvadaro: 50KG Chrome / Painting Kanda Iron Barbell yakatarwa
40cm 2.5cm dhayamita Chromed simbi knurling d ...
Cheap imba yokurovedza muviri chinjika chinjwa epurasitiki cem ...
New kuuya chigadzirwa equipments kugwinya muchina ...
Wholesale New Price kupenda kukanda simbi adjustab ...
Gym equipments Nhema pfumbu kupenda chinjika ...
New mhando Custom Weight Kuremesa Adjustable plast ...